Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal: Astaamaha Lagu Yaqaano CWXO, By. Xaaji M/rashiid.
Maqaal: Astaamaha Lagu Yaqaano CWXO, By. Xaaji M/rashiid.
Posted by ONA Admin	/ January 7, 2018
Marka hore waxaan jeclahay inay akhristayaashu ila wadaagaan kuwa ay yihiin Ciidanka WadanigaXoraynta Ogadenya (CWXO) . Sanadkii 1991 ayuu isbadal xukuumadeed ka dhacay wadanka guumaystaha itoobiya. Waxaa xoog iyo farsamo wada socda lagaga qaaday Askari Mangiste xayle mariam oo wadanka hoogaamiyay ilaa 17 sano.
Ururka ONLF oo siyaasad ahaan u dhisnaa caalamkana ku kala baahsanaa ayaa si xowli ah ula jaanqaaday isbadalkii markaa socday. Qaabka wax lagu dhisayay wuxuu ahaa in ay qowmiyad waliba soo dhisato maamul u gaar ah, kadibna nidaamka federaalka ku yeeshaan xubnihii baarlamaanka u matali lahaa. Shaqada oo si habsami ah u socota ayuu maamulkii sare ee itoobiya wuxuu afgambiyay maamul hoosaadkii ogadeniya ka dhisnaa. Waxaa gobolokii ka dhacay kala carar kadib markii dadkii laga dhigay wax la dilo, wax la xidho iyo wax la qixiyo. Madaxdii Ururka ONLF ee waqtigaas ayaa xaqiiqsaday inaan ciidan la’aan waxba la wadi karin sidaasi darteedna ay waajib tahay dhismaha ciidankii dalka xorayn lahaa.
ASTAAMAHA LAGU YAQAANO CIIDANKA WADANIGA XORAYNTA OGADENYA (CWXO)
Hadaan tilmaan waafi ah ka bixiyo ciidanka xooga dalka Ogadenya ee lagu soo gaabiyo CWXO, waa ciidan laga dhisay dhanka akhlaaqda oo dadwaynuhu aad u amaaneen. Waa ciidan cibaadada ilaahay iyo siday u gudan lahaayeen laga dhisay, waxaana fududeeyay arintaas qaar kamid ah culimadii dalka oo halganka ku biiray.
Waa ciidan qaatay tababar tayo leh oo lamid noqon kara ama kudhow midka milatariga. Waa ciidan geesininada iyo dagaalka ku caanbaxay oo guulo ka soo hooyiya goobaha dagaalka, waxaana arinkaas qiray ciidanka cadowga. Waa ciidan lagu yaqaano naxariis dhexdooda ah iyo dhanka bulshadaba. Waa ciidan daacadnimadu ay biyo dhigtay oo madaxdooda si dhab ah ula shaqeeya kana run sheegay ballankii ay qaadeen.
Waa ciiadan yaqaana sida loola dhaqmo maxaabiista dagaalka iyo kuwa isa soo dhiiba, isla markaana uguda xuquuqdooda. Waa ciidan u adkeysta gaajada, oonka iyo duruufaha adag ee halganka. Waa ciidan wadani ah oyna marna suurta gal ahayn inay dalkooda dhaafsadaan xoogaa aduunyo ah.
WAXQABADKA CIIDANKA WADANIGA XORAYNTA OGADENYA (CWXO)
Halgamayaal sida aad la soctaan ciidanka xooga dalku wuxuu leeyahay qaybo kala duwan oo mid waliba wadato magaceeda gaarka ah, saanadeeda iyo hawlgalkeeda gaarka ah, balse hadaan idiin dulmaro kooxaha waxaa kamid ah: Danab, Duufaan, Heegan, Hanqadh, Halgan, Gorgor, Birjeex iyo Gaashaan.
Waxaa kale oon qeexayaa wax qabadka ciidanka CWXO iyo kartida dheeraadka ah ee Rabi ku maneystay. Waxqabadka ciidanku waa wax baaxad wayn oona meejan kusoo koobi karin, laakiin waxaan soo qaadaynayaa dagaaladii taariikhda galay ee ay ku qabjabiyeen maleeshiyada itoobiya soo lugoysay! Hadaba meelaha ay ka kala dhaceen iyo taariikhuba waa sida hoos ku xusan-
Dagaalkii Cobole bishii 4 aad 2007. Dagaalkii loogu magac daray “Cashir” ama “Nasri” ee ka dhacay Malqaqa oo Galaalshe ka tirsan 2010. Dagaalkii Loogu Magac daray “Eeba Cadaw” 2009. Dagaaladii Lagu Qabsaday dhagax madaw 2008. Dhamaan dagaaladan oo dhan waxay kor u dhaafayeen inta lagu dilay xero kasta in kabadan 500 oo askari oo itoobiyaan ah, waa sida warka lagu kalsoonyahay igu soo gaadhay, waxaase jira dagaalo badan oo kale oon halkan lagu soo koobi karin.
HIIGSIGA CIIDANKA WADANIGA XORAYNTA OGADENYA (CWXO)
Ciidanka xooga dalku waa ciidan si wayn usoo shaqeeyay isla markaana lasocda isbadalada siyaasadeed ee caalamka ka socda. Waa ciidan si adag ula soo dagaalamay askartii uu Meles ku dhaaran jiray. Waa ciidan ay Astaan uyihiin Qalin iyo Qori, taasoo muujinaysa isu dheeli,tirnaanta halganka.
Waxaa xusid mudan inuu marar badan guumaystaha Itoobiya isku dayay inay khiyaanaan saraakiisha sare ee jabhadda iyagoo usoo maray dariiqyo kala duwan, hase yeeshee dhamaan dabinadaas ayaa lawada fashiliyay. Dadka beeralaydu waxay jecelyihiin inay beerta midho ka goostaan waana sida kaliya ee ay kaga soo waaqsan karaan dhibkii iyo dhafoor xumadii kasoo gaadhay. Aragtida wax garadku waa in halgankii midhihiisa lahelo
Aqoonyanada wax saadaaliya waxay sheegayaan in sanadka 2018 uu noqon,doono gabagabadii Taliska ay shucuubtu in muda ah u afduubnaayeen! Ciidanka Wadaniga xoraynta Ogadenya wuxuu isha ku hayaa xaaladda kataagan Itoobiya isagoo isu diyaarinaya siduu uga faa’iidaysan lahaa fursadaha. Ciidanku wuxuu higsanayaa xornimo dhameystiran inuu gaadhsiiyo dalka iyo dadkiisaba, laakiin way dhici kartaa in la maro marxalado kala duwan.
Xikmadaha waa, wayn ama geeraarada laga hayo ciidanka xooga dalka ogadenya waxaa kamid ah suugaantan hortaada taala!- DEEQ SHISHEEYE DIIDNAY- DANTA JWXO DHAAFSAN, DUMARKIYO CARUURTUNA INTAY DOOL YIHIINEE, DAL SHISHEEYE JOOGAAN, HURDO DEEXSAN MAYNOO, DEGTA QORIGU NOO SUDHAN!. Tixdaas ayay si dhab u qaateen shacabka soomaalida ogadenya, halgankana sidaasay ku galeen ee waa in ciidanka xooga dalku sidaa ku baarugsanaado.
Hadaan soo guunaanado maqaalkan waxay ciidanka xooga dalku haystaan shacab qiimo badan oo kalsooni buuxda ku qaba, taasoo ah mid ayna wada helin jabhadaha xornimo doonka ah ee meelo badan kajira.
Qoraa madax banana